Sida loo ka iCloud Delete Apps
2 1 Warbixiinta iCloud kaabta
Haddii aad soo iibsatay badan oo Chine sanadihii la soo dhaafay aad shaki qabto qaar ka mid ah in aanad isticmaalin. Tani kaliya waa mid ka mid ah sababaha laga yaabaa in aad rabto in aad tirtirto barnaamijyadooda ka iCloud. Qaar ka mid ah sababaha kale waxaa ka mid ah;
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in la abuuro meel on qalab aad
Qaar ka mid ah barnaamijyadooda aad leedahay ayaa laga yaabaa in ay noqdaan aan waxtarka kuu lahaan oo aad rabto in laga takhaluso oo ka mid ah tan iyo markii uu aadan u isticmaali
Waxa kale oo laga yaabaa in aad dooneyso in aad tirtirto barnaamijyadooda qaar ka mid ah isku day in la dadajiyo qalab aad
Wax kasta oo sabab u yahay, aad qarin karaan ama tirtirto qaar ka mid ah macluumaadka app ee iCloud. Maqaalkan waxa aan isku dayi doonaa qaar ka mid ah siyaabaha aad si fudud u samayn karaa.
Qaybta 1. Sida loo Delete rabin Apps joogto ah ka iCloud
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aadan tirtiri kartaa barnaamijyadooda ka iCloud sababtoo ah iCloud ma kaydiso mid ka mid ah barnaamijyadooda aad. Wixii aad aragtid in iCloud waa taariikhda app iibsadaan. Waxaad ku qarsan kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda ku saabsan liiska sida aan ugu dhakhsaha arki doonaan. Waxaad si kastaba ha ahaatee tirtiri kartaa qaar ka mid ah macluumaadka app ee ku kaydsan iCloud iyo yeelan doonto saameyn la mid ah ee la xorayn, ilaa meel iyo sare u qalab aad. Halkan sida;
Talaabada Koowaad: Burcad app Settings ku qalab aad iyo hoos si aad u hesho iCloud. Tubada on iCloud si aad u furto.
Tallaabada Labaad: Tubada on Kaydinta & kaabta ka dibna Maamul Kaydinta
Tallaabada Saddexaad: Raadi "Documents iyo Data", ka dibna dooran app ee aad jeclaan lahayd in ay tirtirto xogta.
Talaabada Afraad: Tubada on Edit
Tallaabada shanaad: Tubada on Button Delete xagga bidixda ka ah faylka aad rabto in aad tirtirto. La keeneen in doonaa in aad si loo xaqiijiyo Kabcada_.
Tallaabada Lixaad: Haddii aad rabto in aad tirtirto wax walba oo ku saabsan ka jaftaa tirtirto oo dhan ka dibna xaqiijin Kabcada_.
Habka kor ku caawiyo, waa in aad ka hesho waxoogaa yar meel lagu kaydiyo badan oo ku saabsan qalab aad. Aan aragno sida aad qarin karo ama unhide Chine ee iCloud.
Qaybta 2. Sidee si ay u qariyaan Chine ee iCloud
Raac tallaabooyinkan fudud si ay u qariyaan Chine ee iCloud.
Talaabada Koowaad: On aad Device in App Store> Updates> iibsaday tagaan. Waa in aad aragto oo dhan Chine ee aad soo iibsatay ku qoran.
Tallaabada Labaad: on your computer, u tag Lugood iyo markaas dukaanka Lugood. Guji "iibsaday" oo Midigta iyo waxaad arki doontaa taariikhda gadashada aad.
Talaabada Sadexaad: duldhig on app ee aad jeclaan lahayd inaad ku dhuumato iyo waxaad arki doontaa in X ah u muuqataa sare ee app ee icon.
Talaabada Afraad: Si fudud guji "x" si ay u qariyaan app.
Liiska Your iibsaday la cusbooneysiin doonaa oo waxaad arki doontaa in app aad qariyey aysan hadda jirin liiska
Waxa kale oo aad unhide karaan barnaamijyadooda maqan iyo in qaybta xigta waxaan doonayaa in aan arko sida aad si fudud u samayn karaa.
Qaybta 3. Sida loo unhide barnaamijyadooda ka iCloud
Raac tallaabooyinkan aad u fudud in ay unhide Chine ee iCloud.
Talaabada Koowaad: on your computer tagaan si ay Lugood dibna gasho xisaabtaada. , Hoos ilaa aad ka heshid "View maqan Iibsasho" oo guji ku yaal.
Tallaabada Labaad: Marka waxaa Riix Apps Tab iyo waxaad arki doontaa oo dhan barnaamijyadooda aad ku qariyey. Just guji "unhide" badhanka soo socda si app si ay u unhide.
Qaybta 4. One click oo bilaash ah ilaa kaydinta dheeraad ah oo ku saabsan iPhone / iPad
Waxaan mar hore aragnay in sababta ugu weyn ee sababta aad u rabto lahaa in ay tirtirto ama qarin Chine ayaa badan oo la sameeyo iyada oo raba in ay lacag la'aan ah ilaa meel dheeraad ah oo halkan hagaajiyo waxqabadka qalab ee. Maxaa dhacaya haddii uu jiro qaab ay aad lacag la'aan ah laga yaabo kaydinta ka badan hal click? Lucky aad u jiro codsi ah in this iyo in ka badan kuu samayn doonaa.
Kuu ogolaanaya in aad tirtirto macluumaadka gaarka ah ka hor inta iibinta, warshadaynta ama Deeqda hore iPhone
Kuu ogolaanaya in aad si joogto ah tirto faylasha ka qalab macruufka
Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad masixi faylasha qaar ka mid ah ama masixi qalab joogto ah
Waxa kale oo ka shaqeeya in ay nadiifiso xogta gaarka ah iyo meel bannaan oo lacag la'aan ah-up
Kuu ogolaanaya in aad nadiifiso files junk ee 1-riix sida aan hoos ku arki doono
Raac tallaabooyinkan fudud si nadiifiyo qalab aad ee 1-click.
Tallaabada Koowaad: Download iyo rakib Wondershare Safe Eraser si aad u computer. Orod Barnaamijka ka dibna lagu xiro qalabka aad si aad PC isticmaalaya fiilooyinka USB. Waa in aad suuqa kala socda.
Tallaabada Labaad: In Window tan hoose ka dooro Nadiifinta 1-click.
Codsiga waxaa isla markiiba bilaabi doonaan inay iskaan qalab aad
Tallaabada Saddexaad: Marka scan la dhammeeyo, tirada guud ee files junk lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala dhashay. Guji "Nadiifinta" oo bilaash ah ilaa kaydinta qaar ka mid ah.
Ku hay qalabka ku xiran habka oo dhan si loo hubiyo in dhammaan faylasha junk waxaa lagu nadiifiyo. Marka geeddi-socodka la soo gabagabeeyo waa in aad suuqa kala socda in bandhigayaa macluumaadka lagu kaydiyo qalabka aad.
Nidaameed iCloud Content in Android: Xiriirada, Messages, Photos, Call Log iyo More
Sidee baan u tirtiri kartaa Contact rabin ka iCloud?
Sida loo iCloud ka saar Device macruufka iyo Raadi My iPhone
3 Siyaabaha ay garab iCloud Lock for Your iPhone.
Sida loo soo ceshano Photos ka kaabta iCloud
> Resource > iCloud > Sida loo ka iCloud Delete Apps